Taariikhda ciyaaraha calamka, Doha (2022)
Home > Qatar > Doha > Gyms & Sports Facilities > Taariikhda ciyaaraha calamka
Naadiga waxaa la asaasay 1892 -kii, kooxda ayaa ku biirtay Horyaalka Kubadda Cagta sannadka ku xiga waxayna ku ciyaartay Anfield tan iyo markii la aasaasay. Liverpool waxay isu taagtay inay tahay awood weyn oo ku jirta Ingiriiska iyo kubbadda cagta Yurub sannadihii 1970 -meeyadii iyo 1980 -meeyadii, markii Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan iyo Kenny Dalglish ay kooxda ku hoggaamiyeen isku -darka koobab kow iyo toban League iyo afar koob oo Yurub ah. Liverpool ayaa ku guuleysatay labo koob oo Yurub ah sanadihii 2005 iyo 2019 oo ay maamulayeen Rafael Benítez iyo Jürgen Klopp, siday u kala horreeyaan; kan dambe wuxuu Liverpool ku hogaamiyay horyaalkii sagaal iyo tobnaad ee 2020, kii ugu horreeyay ee naadigu yeesho xilligii Premier League.
Liverpool waa mid ka mid ah kooxaha ugu taageerada badan adduunka, sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan. Liverpool ayaa xifaaltan soo jireen ah la leh Manchester United iyo Everton. Kooxdu waxay ka beddeshay funaanadihii gaduudka iyo gaagaabkii caddaa oo waxay u beddeshay xarig-gaduud oo dhan-gaduud ah 1964-kii oo tan iyo markaas la isticmaali jiray. Heesta kooxda waa “Waligaa Keligaa Ma Socon Doontid”.
Taageerayaasha kooxda ayaa ku lug lahaa laba masiibo oo waaweyn. Musiibadii ka dhacday Heysel Stadium, halkaas oo taageerayaashii baxsadka ahaa lagu cadaadiyay derbi dumay finalkii European Cup ee 1985 ee Brussels, ayaa sababay dhimashada 39 qof. Intooda badan waxay ahaayeen taageerayaal Talyaani ah iyo Juventus, kooxaha Ingiriiska ayaana la siiyay ganaax shan sano ah oo ka dhashay tartamada Yurub. Musiibadii Hillsborough ee 1989, halkaas oo 97 ka mid ah taageerayaasha Liverpool ay ku dhinteen jabin ka dhan ah xayndaabka wareegga, taasoo horseeday in meesha laga saaro barxadihii taagnaa oo la doorbiday garoomada kuraasta oo dhan ee labada heer ee ugu sarreeya kubadda cagta Ingiriiska.
Luis Suarez: “Waxaan ahayn faqiir laakiin nasiib wanaag waxaan cuni jirnay 3 cunto maalintii. Ka xishoon maayo inaan dhaho waxaan ka shaqayn jiray hagaajinta baabuurta markii aan jiray 11. Waxaan u sheegi jiray hooyaday inaan u sheego inaan la joogo asxaabtayda si aan u aado oo u shaqeeyo sababtoo ah waxaan u baahanahay lacag. "IXTIRAAM 👏🔥
Madridistas Qatar - مدريديستاس قطر
رابطة جماهير ريال مدريد المعتمدة رسمياً في قطر والتي دشنها فلورنتينو بيريز Real Madrid's Official Supporters in Qatar Instagram: MadridistasQ Twitter: MadridistasQ
Wakra Challengers is a cricket team based in Qatar,since 2011
Need Profesional Female Fitness Trainers
World,Qatar,Doha,Al Rayyan,Fareej Al Soudan
We are medical center . we need Need Profesional Female Fitness Trainers to work in our Fitness section .Ready send C.V. On ([email protected])
News Arnta Club
نادي ارنتي الرياضي كن في قلب الحدث
Qatar national team -handball -18